१० लाख भन्दा बढी ऋण पाए विदेशबाट फर्किका युवाको यस्तो छ योजना ! | suryakhabar.com
Home पु.समाचार समाचार १० लाख भन्दा बढी ऋण पाए विदेशबाट फर्किका युवाको यस्तो छ योजना !
on: ८ जेष्ठ २०७६, बुधबार २०:०९ In: समाचारTags: No Comments
काठमाण्डौ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका अधिकांश युवा सहुलियत कर्जा लिएर उद्यमी बन्न आकाङ्क्षी देखिएका छन् । सहुलियत कर्जा लिन वैदेशिक रोजगार बोर्डमा सूचीकृत भएकामध्ये सबैभन्दा बढी युवाले उद्योग/व्यवसाय गरी स्वरोजगार हुन चाहेका छन् ।
बोर्डले सहुलियत कर्जाका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका १८ हजार ७६७ युवालाई सूचीकृत गरेको छ । आवेदन दिएकामध्ये चार हजार ७४७ युवाले कुनै न कुनै प्रकारको उद्योगधन्दा स्थापना गरी स्वरोजगार बन्ने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उनीहरुले उद्योग÷व्यवसायअन्तर्गत मोटरसाइकल/गाडी मर्मत वर्कशप, फेन्सी/ किराना/ इलेक्ट्रिक/हार्डवेयर/ फलफूल/मदिरा/प्लाष्टिक पसल, जुत्ता÷चप्पल कारखाना, आल्मुनियम÷ग्रील कारखाना, प्रेस सञ्चालन, होटल व्यवसाय, हेल्थ केयर सेन्टर, दुग्धजन्य उत्पादनको व्यापार, राईस मिल स्थापना गरी स्वरोजगार बन्ने आकाङ्क्षा देखाएका छन् ।
पशुपालन तथा कृषिजन्य उत्पादनका लागि पनि युवाको आकर्षण देखिएको छ । दुई हजार ६३७ युवाले कुखुरा, माछा, गाई, चौरी, भैँसी, बाख्रा, बङ्गुर, सङ्गुर, मौरी, टर्की कुखुरा, बट्टाइँ चरा, हाँस आदि जस्ता पशुपालन गर्न सहुलियत कर्जा माग गरेको छन् । चिया, कफी, स्याउ, सुन्तला, अलैँची, किबी, कागती, गोलभेँडा, च्याउ, स्ट्राबेरी, तरकारी, ऊखु, केरा आदि जस्ता कृषि व्यवसायमा लागेर स्वरोजगार हुन चाहने युवाको सङ्ख्या दुई हजार २९ रहेको छ ।
अधिकांश निवेदनमा आफूले गर्न चाहेको व्यवसायको खर्चको सारांश मात्र उल्लेख गरेका पाइएको छ । सहुलियत कर्जा माग गर्ने महिलाको सङ्ख्या भने निकै कम देखिएको छ । कूल सूचीकृत सङ्ख्यामा महिला सङ्ख्या ८९३ र पुरुष सङ्ख्या १७ हजार ८७४ रहेको छ । यसैगरी सबैभन्दा बढी निवेदन प्रदेश नं ३ बाट परेको छ । प्रदेश नं ३ का १३ वटा जिल्लाबाट कूल १३ हजार ५६६ जना सूचीकृत भएका छन् भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशका ९ जिल्लाबाट २९४ जना सूचीकृत भएका छन् ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमार्फत् वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारलाई स्वरोजगार बन्नका लागि सिफारिश गरिएको बताए । बोर्डले सूचीकृत भएका युवालाई सहुलियतको कर्जा प्रवाह गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत सरकारसँग सिफारिश गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले परियोजनामा आधारित सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्न सम्पूर्ण वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले आव २०७५÷७६ को बजेट वक्तव्यमा विदेशबाट फर्केका युवाको सीप प्रमाणीकरण गरी त्यस्ता युवालाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित रु १० लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । सरकारले सरल कर्जा कार्यक्रमलाई व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ जारी गरिसकेको छ । सूचीकृत युवाले रु १० लाख ब्याज अनुदानमा प्राप्त गर्नेछन् । उनीहरुले पाँच वर्षभित्र सावा तथा ब्याज भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने छ ।
८ जेष्ठ २०७६, बुधबार २०:०९